INGELOSI INANI 111 INTSINGISELO + YESIMBOLI - INANI
Ingelosi Inani 111 Intsingiselo yokomoya + uphawu
Intsingiselo yokomoya engama-555
Wakhe wayiva intetho ethi, Nantoni na oyifaka kwindalo iphela ibuyela kuwe? Inani u-111 luphawu lokuba naziphi na iingcinga, iimvakalelo, iintshukumo, kunye namandla owakhuphayo yile nto ngoku ibonakalisayo ebomini bakho! Eli nani lisebenza njengesikhumbuzo sobuhlobo kwiingelosi zakho ukuba zigcine imeko elungileyo, nethemba kwaye uya kuyifezekisa yonke iminqweno yakho. Vumela naziphi na iimvakalelo okanye iingcinga zoloyiko zihambe, ziyithumele kwi-Universe ukuze inyange. Njengokuba umthetho wokutsala uhamba, amandla, into, okanye imeko ofuna ukuyitsala kufuneka ibe ngumdlalo onamandla kumandla akho… ubuyela kuwe njengomazibuthe! Indlela entle yokutsala ngakumbi le nto uyifunayo ebomini kukuziva kunye nokwenza umbulelo. Ukungcangcazela kombulelo kusebenza njengempembelelo yekhephu, ekhula kakhulu, kunye nako konke ukulunga ebomini kuwe!
Inombolo ye-111 ingahlulwa ibe yi-1 kunye ne-11, ehambelana nesiqalo esitsha, inkuthazo yokuqhubela phambili, ukuthatha inyathelo eliphefumlelweyo, impumelelo, inkululeko kunye nobunkokheli! Ngoku lixesha elihle lokwamkela iimpawu zakho ezizodwa- ubuntu bakho-NGABA NAWE! Olu luphawu oluvela kwindalo iphela ukuthatha ixesha kunye nokunxibelelana ne-Higher Self yakho, icandelo lakho elikwaziyo okona kulungele wena ngawo onke amaxesha, kwaye kukunxibelelana ngqo noMthombo. Ukuthatha ixesha lokucinga ngaphakathi kuya kutyhila ukuba ngaba kukho nayiphi na imikhwa okanye iinkolelo ezingasasebenziyo ezilungileyo zakho kunye nokuthatha ixesha lokuzisusa ziya kudala indawo yento entsha nenomdla ukuzalisa ubomi bakho! Inani le-111 linani lokungcangcazela eliphezulu kunye nomqondiso oqinisekileyo wokuvuka ngokomoya, ukukhula ngokomoya, kunye nokuthatha intuition yakho ukuya kwiindawo eziphakamileyo.
Qiniseka ngokwazi ukuba oku kunamandla portal ikuvulele kwaye izinto ziya kubonakala ngathi zenzeka ngesantya esikhawulezayo. Kubalulekile ukuba uhlale phantsi, ubekhona, kwaye uhlale ulungile kwiingcinga nakwiimvakalelo zakho.
Gcina incwadi yeendaba ngalo lonke ixesha ubona le nombolo kwaye ubhale phantsi into obucinga ngayo ngelixesha ubona inani. Oku kunokubonisa imikhondo malunga nendlela yokuqhubela phambili, kunye nento onokuyifuna ukuyitshintsha ukuze uzise intabalala kunye neentsikelelo ebomini bakho! Khululeka, themba, kwaye uyazi ukuba uMhlaba kunye neengelosi ziyayixhasa inkqubela yakho yokomoya kwaye umsebenzi olula, Kwaye yonke into oyinqwenelayo iya kutyhilwa ngexesha elifanelekileyo likaThixo.
Iivenkile ezilungileyo zezixhobo zolusu lolusu olunamafutha
444 intsingiselo yokomoya
Ukulunywa kwe-bug ngesangqa esibomvu esiyijikelezileyo
eyona ndawo intle yokuthambisa ulusu olugugayo
Ingelosi inombolo 1010 intsingiselo
Inombolo yomoya 333